Mpanamboatra sy mpamatsy akanjo fitokana-monina iray azo ampiasaina amin'ny Wholesale | qiangwei
Akanjo fanokanan-javatra iray azo alefa
1. akanjo mitoka-monina mitambatra, vita amin'ny spunlace lamba tsy tenona + PE lamba sarimihetsika azo tsofina, hazavana, fofonaina, tantera-drano, lamba fotsy, lanjan'ny gram 63g / ㎡, haavon'ny fanoherana ny hamandoana 4, fanoherana rano> 10Kpa, haavon'ny hamandoana ambonin'ny 4 .
2. Ny endriny mitafy akanjo manontolo dia vita amin'ny fanjairana kitapo, tsy misy fivoahan'ny fanjaitra fanjaitra, fanjaitra fanjaitra 10-14 isaky ny 3cm, dian-tongotra sy kofehy mahitsy, tsy misy fanjaitra mitsambikina, ary fanokanan-tena mahomby amin'ny sombina tsara. Ny cuff, ny tongotra ary ny cap dia malefaka ary mora apetraka ary esorina. Ny valahana dia tendon elastika, mety amin'ny olo-malaza samy hafa hitafy.
3. Zipper an'ny flap aloha, kasety adhesive roa-sisin'ny flap ivelany, famehezana tsara.
4. Ny vokatra dia fonosana tsy miankina, ampiasaina indray mandeha ary rava aorian'ny fampiasana. Izy io dia simba sy sariaka amin'ny tontolo iainana.
5. Ny vokatra dia tazonina anaty tontolo maina, misy rivotra ary tsy manimba amin'ny hafanan'ny efitrano, ary maharitra 24 volana izany.
6. Azafady mba hamafiso ny tontolon'ny fampiasanao alohan'ny hampiasana azy. Ny orinasantsika dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ateraky ny fihoaran'ny fampiasa sy fampiasa amin'ny fampiasa an'ity vokatra ity.
7. Mora mirehitra ity vokatra ity. Azafady mba alaviro ny loharano mafana sy ny afo misokatra rehefa mampiasa na mitahiry.
8. Jereo ny fanamarinana momba ny famaritana, ny daty famokarana ary ny laharan'ny batch.
9. Ampirisihina tsy hikasika ny hoditra ianao ary hitafy azy mandritra ny 24 ora mahery.
10. Ny vokatra dia mizara ho XS / S / M / L / XL / XXL, miaraka amin'ny moQ misy sombintsombiny 1000, farantsa 50 / boaty, ary ny lanjan'ny 0,24kg isaky ny sombiny. Support customization, afaka manome santionany 2, fohy fandefasana tsingerina.
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny ivon-toeram-pitsaboana ho an'ny toeram-pitsaboana, ny paroasy, ny laboratoara ary ny akanjo fitokana-monina mahazatra fanary unibody.
Teo aloha: Palitao ivelany
Manaraka: Mitokana akanjo ambaratonga 1
Akanjo fanokanan-tena amin'ny fitsaboana